Ihe kpatara ị ga-eji tinye akaụntụ ahịa - banye - banye - shoppingdirect24.com - SD24
Home > Ihe kpatara ị ga-eji tinye akaụntụ ahịa - banye - banye
Biko mee ka anyị na akaụntụ.
Mgbe ị nwere akaụntụ na abanye na usoro ahụ, usoro ahụ ga-enwe ike icheta ọchụchọ gị na echiche nke ngwaahịa nwere ike ịnye gị nịpụta kachasị mma na nchịkọta nkwalite ngwaahịa.
Usoro ahụ ga-echeta nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị, ka ị ghara ịbanye ozi ahụ oge ọ bụla maka nchebe ọzọ.
Anyị nwere ike nyezie gị ụfọdụ Koodu ego ego nkwado.
Anyị agaghị eji ozi maka nzube ọ bụla.
Biko lee na nke a nakwa na peeji nke Nkwupụta Nzuzo anyị.